ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့ပြောသွားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက်များ - Zet Star
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့ပြောသွားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက်များ
အမေရိကန်သမ္မတအတွက် အသုံးပြုနေသည့် ဆေးကိုပင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူများအတွက် အသုံးပြုနေသည်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက် ည ၈ နာရီအချိန်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွှားမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ပြည်သူများသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် မိန့်ခွှန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“နိုင်ငံတော်ကတော့ အတက်နိုင်ဆုံးပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်နေပါတယ်။ နဲနဲကြွားသလိုဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်မတို့အခု အမေရိကန်သမ္မတကြီးအတွက် သုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဆေးကို တက်နိုင်သလောက် ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေအတွက် သုံးနေပါတယ်။ (Remdesivir) အဲ့ဒီဆေးကို ကျွန်မတို့အိန္ဒိယကနေ ၀ယ်ထားတာရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်လှူထားတာလည်းရှိပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါဆေးကို ရောဂါအခြေနေ အနည်းငယ်ပြင်းထန်သည့် လူနာများအတွက် အသုံးပြုပြီး အားလုံးအတွက်သုံးနိုင်သည့် အခြေအနေမရှိသေးသော်လည်း ပိုပြီး၀ယ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သုံးသင့်သုံးထိုက်သည့် လူနာများအတွက် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ည နိုင်ငံတော်ပိုင် ရုပ်မြင်သံကြား ၈ နာရီ သတင်းပါ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ၏ မိန့်ခွန်း အကျဉ်းချုပ်နဲ့ ကောက်နုတ်ချက်အချို့ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာ မပြတဲ့ သူတွေက ကူးစက်မှုများလာတယ်။ တစ်ဦးချင်း ရောဂါရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရှိကြဖို့လိုပါတယ်။ ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သတ်တာတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန်လုပ်မယ်။
သတိပြုစေချင်တာကတော့ စိုးရိမ်မလွန်ဖို့ပါ။ သတ်မှတ်စည်းကမ်းတွေနဲ့ နေရင် ရောဂါ မကူးစက်နိုင်ဘူး။ ပြည်သူတွေ ကိုဗစ် ပညာရေးအစီစဉ်ကို ပြောင်းမယ်။ နောက်ပတ်ကစပြီး ကိုဗစ်ရောဂါ ရပြီးပြန်ကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ ပြည်သူတွေ မေးမြန်းတာမျိုးလုပ်မယ်။ ရောဂါရပြီးတဲ့သူတွေကလည်း သွေးရည်ကြည်လှူဒါန်းကြပါ။
အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတသုံးတဲ့ ဆေးကို ပြည်သူတွေအတွက်သုံးနေပါတယ်။ Remdesivir ဆေးပါ၊ အိန္ဒိယကလည်းလှူတယ်။ ဝယ်လည်း ဝယ်ထားတယ်။ ရောဂါပြင်းထန်တဲ့ လူနာတွေကို သုံးနေတယ်။ လူနာတိုင်းတော့ မသုံးနိုင်ဘူး။
စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေ လည်ပတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအတွက် အရေးကြီးတယ်။ Stay at Home မြို့နယ်တွေမှာ မဲပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်။ ရောဂါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ချရတယ်ဆိုရင် စည်းကမ်းချက်တွေကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးမယ်။
← ဘုရားမြွေဆိုတာ တကယ်ရှိသလား? ဘုရားပေါ်မှာ မြွေတွေ ထားသင့်သလား?
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရဲ့ ကိုဗစ်လူနာ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် မနက်ဖြန် စဖွင့်ပြီ →